Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiisha TPLF Oo Bilaabay Hanti-Boob Badheedh Ah.
Saraakiisha TPLF Oo Bilaabay Hanti-Boob Badheedh Ah.
Warar lagu kalsoonyahay oo naga soo gaadhay magaalada Adis-ababa ee xarunta gumaysiga Ethiopia ayaa sheegaya in musuqu uu gaadhay meel aan Waxba laga qaban karin.
Warkan oo lagu soo qoray Wargayska Durame ayaa sheegaya in hantida shacabka ee la lunsaday ay malaayiin dollar tahay halka ayna jirin wax xal ah oo u muuqda in boobka hantida shacabka lagu badbaadinayo.
Sida warku sheegayo waxaa hanti aad ubadan dhacay horjoogaha Gobolka Tigrey oo kamid ah saraakiisha ugu awooda badan talada wadanka wuxuuna masuulkan qirtay lacagta isaga lagu eedaynayo oo 4 milyan oo dollar ah in ay qaadatay xaaskiisa oo wadanka ka maqan wuxuuna sheegay musuqa Noocaas ah in ay iyadu gaysatay.
Sida aan Xogtan kuhellay waxaa kaloo ninkan uu lunsaday 80 milyan oo bir oo sida lasheegay ay soo uruuriyeen dhalinyaro qurba Joog ah oo u dhalatay Gobolka herarida waxayna dhalinyaradu sheegeen in ay lacagtoodii ku dhacday jeebka ninkaas.
Dhinaca kale waxaa kacdoon sameeyay qaar kamid ah dhalinta oo gudaha wadanka joogay waxaana lagu abaal Mariyay jeelka si loo aamusiiyo Waana mid kamid ah dhaqamada taliska wayaanaha.
Dhalinta ayaa lagu soo waramayaa in ay sheegeen cadaalad ayaan kusugaynaa xabsiga dhexdiisa Wuxuuse hadalkaasu u muuqda riyo marka la eego dhaqanka kajira gumaysiga Ethiopia iyo sida cadaaladu god madow ugu jirto.
Kuma cusba dhagaha shacabka Itoobiya in haweenka ama xaasas ka saraakiisha wayaanaha ay hanti dhaceen waxaana laxasuustaa xaaskii KT Malis Zinawi oo lagu magacaabo Asaf Masfin in ay hantida umada si badheedh ah u dhici jirtay kana samaysay lacag badan oo gudaha iyo dibada wadankaba taala.
guud ahaan shacabka kuhoos nool taliska macangaga ah ee wayaanaha ayaa lagu soo waramayaa in hada dhug iyo dhago u yeesheen hantidooda laboobayo, waxayse arintu umuuqataa in ay saraakiishu kubalameen boobka hantida shacabka ka hor kala dhaqaaqa lafilayo ee gumaysiga.